မုန်းတာ (စ/ဆုံး) – Grab Love Story
မညိုမြိုင်က အသက်သုံးဆယ်ကျော်မှ ယောင်္ကျားယူတာ။ ငယ်တုန်းက အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်တုန်းကတော့ အိမ်နီးနားချင်း အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ သုံးလေးငါးရက်လောက် လိုက်ပြေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အိမ်က အချိန်မီ တိုးတိုးတိတ်တိတ် လိုက်ခွဲပြီး ရှမ်းပြည်ဖက်က အမျိုးတွေဆီပို့ ကျောင်းပြောင်းပြီး တက်ခိုင်းလိုက်တော့ အားလုံးက အပျိုလို့ပဲ သိကြတာပေါ့။ အပျိုမှတော်တော့်ကို ထွားတဲ့အပျိုလို့ ပြောရမှာပဲ.. သွေးသားထိုးတက်ခါစ လေးငါးညလောက် အလိုးခံထားလိုက်ရတော့ နို့တွေဖင်တွေက ချက်ချင်းလိုလိုပါပဲ သိသိသာသာကြီးကို ဖူးမောက်ဖွံ့ထွားလာတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံတောင် မယုံမိဘူး။
အဲဒီမှာလဲ ကိုယ့်ထက်အတန်းကြီးတဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်နဲ့ ရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ရည်းစားဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လောက်ရက်ခြားခြားပြီး အလိုးခံခဲ့ဖူးပေမယ့် မယူဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ရည်းစားသုံးလေးယောက်ပြောင်းခဲ့တာ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ကိုတောင် အဆစ်အလိုးခံလိုက်ရပါသေးရဲ့။
အဆစ်မှ တကယ့်အဆစ်လိုးသွားတာ အမှတ်တရပါပဲ.. ရည်းစားနဲ့ ညပိုင်းချိန်းပြီး ကျောင်းခန်းထဲက ထိုင်ခုံရှည်ပေါ်အလိုးခံနေတုန်း လာမိသွားတော့ ငိုယိုတောင်းပန်ပြီး အလိုးခံခဲ့လိုက်ရတယ်။ သူကမိန်းမနဲ့ လူလည်းဖြစ်.. လီးကလည်း ရည်းစားရဲ့လီးထက် တော်တော်လေးကို ထွားလွန်း.. တုတ်လွန်းနေတော့ ထိုင်ခုံရှည်ပေါ်ရော စားပွဲပေါ်မှာရော လိုးချ သွားချက်တွေများ တော်တော်နဲ့ကို မေ့ပစ်လို့ကိုမရတော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ဆယ်တန်းအောင်တော့ ပြည်နယ်ဒေသမို့ အလုပ်ကအလွယ်တကူရပြီး ဒီမြို့ကိုရောက်လာတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့မှ အခုယူလိုက်တဲ့ ယောင်္ကျားက မြို့နယ်အဆင့်နဲ့ပြောင်းလာတာ။ ယူတဲ့ယောင်္ကျားက ရာထူးကြီးသလို အသက်လည်း ကြီး လီးလည်းကြီးစံချိန်မီပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒီဒေသခံ ဒီမြို့သား..ပင်စင်ယူခါနီးလို့ သူ့မြို့မှာပဲ အခြေချဖို့ပြောင်းလာတာ။
စားဖားကြီးဆိုတော့ ပြောင်းရောက်လာပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံကြတဲ့ နေ့ကတည်းက မညိုမြိုင့်မျက်ဝန်းညိုတွေကိုကြည့်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကိုဖောက်ထွင်းသိတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီး သိပြီးသွားပြီ။ အမှန်ပြောရရင် မညိုမြိုင်လည်း ရာထူးနဲ့ဥပဓိရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီး နည်းနည်းစိတ်လာမိလို့ ငြင်းဆန်တွန်းလှန်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့
ခွန်အားမရှိတာ အမှန်ပဲလေ။ အထာပေးခဲ့မိတာ မှန်ပေမယ့် ဒီလောက်ကြီးတော့ဖြင့် ပါးနပ်မယ် လုပ်ရဲမယ်တော့ မထင်ခဲ့ဘူး။
အဲလိုနဲ့ အပျော်လိုလို အတည်လိုလို ရိရိပြီး ငြိသွားလိုက်ကြတာ.. သုံးလေးလကြာတော့ အပျော်လည်း မဟုတ် အတည်ကြီးလည်း မဟုတ်တဲ့.. တိတ်တိတ်ပုန်းမယားငယ်ဘဝရောက်သွားရော။ ကိုယ်က ငယ်ရွယ်ပြီး အပေးကောင်း အပြုအစုကောင်းတော့ သူကတရားဝင် လက်ထပ်ယူချင်ပေမယ့် သူ့မှာက ကျန်းမာရေးချူချာတဲ့ မိန်းမနဲ့ သားကြီး သမီးကြီး တွေနဲ့လေ။
ဒီလိုနဲ့မသိသာအောင် အထာနဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းတစ်လက်ကိုင် တစ်လတစ်ခါထဲ ကျွေးပြီး ဇာတ်မျှောထားလိုက်တာပါ။ ဖြစ်ချင်လာတော့ သူပင်စင်ယူပြီမို့ ဇာတ်လမ်းဖြတ်ပစ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတုန်း သူ့မိန်းမက ဆုံးသွားတာနဲ့ ကြုံရပြန်တယ်လေ။ အဲဒီမှာ သူကပိုကဲလာပြီး ရာထူးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေ နေရာမှာငွေကိုပုံအောပြီး ခွာမရနိုင်အောင် ကပ်နေတော့ မညိုမြိုင်မှာ စားရမှာကသဲနဲ့ ရှပ်ရှပ်.ပစ်ရမှာက အဆီနဲ့ဝင်းဝင်းဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတယ်။
မညိုမြိုင်ရဲ့ဘော်ဒီနဲ့အပေးကောင်းတာတွေကို စိတ်မချနိုင် လွန်းတာနဲ့ သားကြီးသမီးကြီးတွေက တားနေဆီးနေတဲ့ကြားက အတိုက်အခံလုပ်ပြီး နောက်ဆုံးတော့ ခြောက်လတောင်မှ မခံနိုင်ဘူး. မညိုမြိုင်ကို ဇွတ်ရောအတင်းရောလက်ထပ်ပြီး အိမ်ပေါ်ထိခေါ်တင်တော့တာပါပဲ.။
သူဖြစ်ချင်သလိုလက်ထပ်ပြီး တကယ်တမ်း ပိုင်ဆိုင်ရပြီ.. စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လိုးကြရပြီဆိုတော့ ဆယ်ရက်လောက်ပဲ လိုးလိုက်ရုံနဲ့ ကွာဟမှုတွေကို သိသွားပြီ။ အသက်အရွယ်တို့ လီးရဲ့သန်စွမ်းမှုတို့ သက်လုံတို့ နှာထန်တာတို့ဆိုတာတွေက သိသိသာသာကြီး စကားပြောလာတော့ မညို မြိုင့်ကို ဘယ်လိုမှနိုင်အောင် မဖြိုနိုင် မလိုးနိုင်မှန်း သိလာရပြီ။
ငွေရှိလို့ဆေးဝါး အရှိန်နဲ့လီးတောင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့် သက်လုံမကောင်းပဲ. ဟောဟဲလိုက်
နေတာများလာတော့ မညိုမြိုင်ကချည့်ပဲ တက်ဆောင့်လိုးပေးနေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီ။
အားမရပေမယ့် ဒီလောက်လိုးဖိုတောင်မှ နှစ်ည. သုံးညနားပေးပြီးဒီအိုးကြီးကို တစ်ချီဖြို နိုင်တာကိုပဲ ကျေ နပ်ရပါပြီ။ မညို မြိုင်လို လုံးကြီးပေါက်လှ မိန်းမအတွက်တော့ ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်သလို နည်းနည်းမှ အဆင်မပြေတာသိနေပေမယ့် သူဘာမှ မတတ်နိုင်တာမို့အားနာမိတာတော့ အမှန်။
” ညောင်းနေလို့လား အဖေ..ဇက်ကြောလေး အဆွဲခံနိုင်မလား “
သားကြီးတင်ကိုရဲ့မိန်းမလေ. နှင်းအိအိတဲ့။ ချွေးမ နာမည်က အေးအေးလေးထင်ရပေမယ့် လူပုံကတော့ မညို မြိုင်ထက်သာတယ်။အမှန်ကိုဝန်ခံရရင်.. ဟိုတုန်းက သူ့ကိုလိုးမိတော့မှာမို့လို့ သူ့လောက်နီးပါးဖင်ကြီးတဲ့ မညို မြိင်ကို စိတ်လည်ပြီးယူဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဖင်ကြီးတဲ့အပြင် ဘာသာက မတူပဲ ခေတ်မီလွန်းတာပဲလား . ပွင့်လင်းတာပဲလား.. ယွတာပဲလား.. ဘာမှန်းတော့ မသိဘူး.. အနေအထိုင် အပြောအဆိုတွေ ကဆက်စီသိပ်ဖြစ်နေတော့ ဟိုတုန်းကများဆို နေ့တိုင်းလီးတောင်ခဲ့ရတာအမောပဲ။ သူ့ဖင်ကြီးမှန်းပြီး အသက်ကြီးမှ ဂွင်းတိုက်ခဲ့ရတာ နေ့တိုင်း မဟုတ်ရင်တောင်မှ တစ်ရက်ခြား. နှစ်ရက်ခြားပေါ့။
အခုလဲအပေါ်ထပ်ကဆင်းလာပုံက သူ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ.. စွပ်ကျယ်ချိုင်းပြတ်နဲ့ဘော်လီမပါဘူး။ အိမ်နေရင်း ဝတ်နေကျပေမယ့် သားသမီးသာမမွေးဖူးတာ သူ့နို့ကြီးတွေက နို့စို့ကလေးအမေနို့ထက်တောင် ကြီးသေးတယ်။အမြဲတမ်းလှုပ်ရမ်းတုန်ခါနေတာကိုပဲ မြင်နေရတော့ ဒီလီးကမာပြီး ထလာရတော့တာပဲပေါ့။
” သမီးက အားနေတယ်ပေါ့..အားရင်လဲ.. မညိုမြိုင် အပြင်သွားနေတုန်းလေး ဆွဲလိုက်ကြရအောင် “
နှင်းအိအိက ဆိုဖာနောက်ကျောမှီကို ဝမ်းပျဉ်းသား မို့မို့ကြီးဖိကပ်ရပ်ပြီးခေါင်းကို နှိပ်ဖို့ သူ့လက်နှစ်ထက်နဲ့ ဆွဲယူလိုက်တော့ နို့လုံးကြီးတွေထဲထိုးဝင်သွားတာ အိကနဲ နင့်နင့်ကြီးမြုပ်ဝင်သွားတယ်။
” အားပါး..နာမည်နဲ့လူကတော့ လိုက်လဲလိုက်ပါရဲ့. ငါ့သားက မိန်းမရွေးတော့ အတော်လေး မိုက်တာ.ဟဲဟဲ “
နှင်းအိအိကလည်း ဒီအပြောတွေခံရပေါင်းများလို့ ရိုးနေပြီလေ။
” ဟင်းဟင်း..အိကနဲပဲမလား..မြိုင်က နှင်းအိကို ဖင်ချင်းပဲယှဉ်နိုင်မှာပါနော်.. နို့ချင်းယှဉ်လို့ကတော့ ဒီအိမ်မှာ နှင်းအိက ပထမပဲ.ဟုတ်တယ်မလား ဒိုင်လူကြီး”
” ဟဲဟဲ..ဒိုင်လူကြီးဆိုရင်တော့ ဒီဒိုင်က လာဘ်စားတယ်နော.. ငါ့သမီး အင်းအင်း.. ကောင်းတာကွာ.. ခေါင်းမနောက်တာတွေတောင် ကြည်သွားတာပဲ ဟီးဟီး အိလိုက်တဲ့ နို့ရီး “
” ကြည့်..သူသက်သက်မဲ့ ဇိမ်ခံတာ.. ခိခိ.. သူများလာဘ်ပေးနေတုန်းကတော့ ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြ လုပ်နေပြီးတော့ ဟွန်း..ခုမှ.. မုန်းတာ ခိခိ “
နှင်းအိအိက ခေါင်းကိုနှိပ်သလိုလိုနဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကို လက်ဖဝါးတွေနဲ့ ခပ်ယွယွလေး ပွတ်ကစားနေတော့ ဦးမင်းကိုက သူ့နှုတ်ခမ်းနားရောက်လာတဲ့ လက်ချောင်းတွေကို ပါးစပ်ထဲဆွဲထည့်ပြီး တစ်ပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေလိုက်တယ်။
” အွန်..ချွဲကျိ ချွဲကျိ နဲ့..ဟင်း ဘာတွေလဲကွာ.. မှန်း နမ်းကြည့်ရအောင် “
နှင်းအိအိက လက်ကိုပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်တော့ မလိုလိုနဲ့ လက်ညှိုးလေးပြန်သွင်းပြီး လီးနဲ့ စောက်ပတ်ကိုလိုးသလိုမျိုး တပြွတ်ပြွတ်လိုးရင်း တစ်ခိခိရယ်တယ်။
” ခိခိ..အခုပဲ အပေါ်မှာကိုတင်ကိုနဲ့ တစ်ကြောင်းလိုးလာတာ.. ခိခိ အဲဒါတွေက သူ့လီးကို သုပ်ပေးရင်းနဲ့ သူပြီးကိုယ်မပြီး..ဟီးဟီး.. မဝတစ်ဝမို့ စောက်ပတ်ထဲနှိုက်ထားခဲ့လို့ စောက်ရည်တွေနဲ့ လီးရည်တွေရောနေတာ.. ဟီးဟီး..ချိုတယ်မလား ပြွတ်ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ် ပု ပွတ် ပလွတ် “
” ဟူး..ချိုတယ်..စောက်ရည်က သိပ်ချိုတယ်.. လာ အဖေ နှင်းအိစောက်ပတ်အထဲက စောက်ရည်ချိုချိုတွေထပ်စုပ်ပေးမယ်.. အဖေ့ဘေးလာထိုင် “
” ဟင့်..ဖေကကွာ..အလိုးခံရတာမဝလို့ ဆင်းလာတာပါဆိုမှ စောက်ပတ်ယက်ခံရရုံပဲဆိုရင် ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့..ဟွန့် ဟွန့် လီးနဲ့မလိုးပေးရင် ယက်ခံဘူးပဲ.သူ့လီးပြ.. သူ့လီးမတောင်ရင် ယက်ရဘူးပဲ..ပြ ပြ ချွတ် “
ပုဆိုးအောက်ကလီးကြီးဆတ်ကနဲထိုး ထောင်ထနေမှန်း ဆက်တီအနောက်က နေပြီးမြင်ရပေမယ့် နှင်းအိအိက ဦးမင်းကိုရဲ့ပုခုံးကို နို့လုံးကြီးတွေနဲ့ဖိပြီး ပုဆိုးခါးပုံစကို ကုန်းဖြည်တယ်။
” အားပါး..အကြီးကြီးပဲကွ..ပွတာပဲ.. ကိုတင့် လီးထက်တုတ်တယ်ဆရာ.. ခိခိ. သားအဖပီသတယ်.. သားကတုတ်ပါပြီဆိုမှ ဖအေကပိုတုတ်နေသေး… အီးဟီး ..ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်..ဇိမ်ပဲဆရာ.. နှင်းအိတို့က ဒါမျိုးကြီးတွေမှကြိုက်တာ “
ဦးမင်းကိုက မညိုမြိုင်နဲ့ လိုးဖို့ဆိုရင် ဒီလောက် လီးတောင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မြိုင် နဲ့ညားပြီး လိုးလာခဲ့ရတဲ့လေးငါးခြောက်လအတွင်းမှာ မြိုင်က တစ်ချီမှ မပြီးခင် သူကချည့်ပဲ ပြီးပြီးသွားရပေါင်းများလို့ နိုင်အောင် မလိုးနိုင်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတာနဲ့ပဲ
နှင်းအိကျတော့ သူလိုးချင်ခဲ့တာကြာပြီလေ.. မြိုင်နဲ့ လိုးနေတုန်းတောင်မှ လိုးအားလျော့သွားတဲ့အခါဆို နှင်းအိဖင်ကြီးကိုမှန်းပြီး လိုးရတဲ့အထိ ဆွဲအားကောင်း
နေတော့ လီးကတောင်သလားမမေးနဲ့.. မာခဲနတောပဲ။
” စောက်ပတ်ယက်နဲ့တော့နော်.. အလိုးပဲခံချင်တာ.. တစ်ခါတည်းတန်းလိုး “
ဆိုဖာလက်တင်ပေါ်ခေါင်းအုံးပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်က ဦးမင်းကိုရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးကိုခွပေးထားတယ်။ ပေါင်လည်အထိရောက်နေတဲ့ထမီကို ဦးမင်းကိုက ခါးအထိလှန်တင်လိုက်တော့ စောက်မွှေးရိတ်ထားပြီးခါစ စောက်ဖုတ်ကြီးက ဝင်းဝင်းကြီးပြူးကနဲပေါ်လာတယ်။ စောက်ခေါင်းက ခပ်ဟဟလေးပွင့်နေပြီး စောက်ရည်ဖြူဖြူတွေ စို့နေတာမြင်တော့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း တအားလိုးချင်သွားမိတာပေါ့။
အဲဒါနဲ့ လျှာဖျားမှာစုလာတဲ့ တံတွေးတွေကို ပြန်မျိုချတော့ ဂလုကနဲ အသံအကျယ်ကြီးမြည်သွားတယ်။ အချိန်သိပ်မဆွဲတော့ပဲ ဒူးတွေပြင်ထောက် နှင်းအိရဲ့ပေါင်ကြီးတွေ ပုခုံးပေါ်ထမ်း လီးဒစ်ကို စောက်ခေါင်းမှာတေ့လိုက်တော့ သိပ်အလိုးခံချင်နေတဲ့ နှင်းအိက လီးချောင်းကြီးကို လဒစ်အောက်နားက ကိုင်ပြီးတေ့ပေးထားတယ်။
” အားပါး..တုတ်တာ..ထည့်..ထည့်. ထိုးထည့်တော့.. အင့် “
လဒစ်ကိုစောက်ခေါင်းထဲထိုးမြှုပ်သွင်းတော့ ချွဲချွဲကျိကျိ ပူပူနွေးနွေးနဲ့ အိကနဲနစ်ဝင်သွားတယ်။ နှစ်ချက်သုံးချက် ဖင်ချွချွပြီးလိုးတော့ တစ်ပြွတ်ပြွတ်နဲ့ အသံတွေထွက်လာပြီ။
” ထည့်လေ..ထည့် ထည့်..အရင်းထိ ထိုးထည့်ပြီးမှ အဲလိုဆောင့်ဆွလိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး.. မုန်းတာ “
ဦးမင်းကိုက နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဆွပြီး လီးအရင်းထိ ပစ်ဆောင့်လိုးပစ်တယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဆိုပေမယ့် သူ့သားကြီးကလည်း နိုင်အောင် မလိုးနိုင်ဘူး ထင်တာပဲ. စောက်ခေါင်းက စေးကျပ်နေတော့ လိုးရတာ သိပ်အရသာရှိတာနဲ့ နို့ကြီးတွေနှိုက်ဆွဲပြီး အချက်ငါးဆယ်လောက်တရစပ်ပစ်ဆောင့်လိုးပစ်တယ်။
” မုန်းဟာ..မုန်းဟာ..အင့် အင့် အင့် မုန်းစမ်း.. ဖောင်းဖောင်းပြွတ် ပြွတ်ပြွတ်.. ဖုံး.. ဖောင်းဖောင်းဖောင်း..ပြွတ်စွတ်ပြွတ် ပလွတ်.. ဖောင်းဖောင်ဖောင်း. “
” အင့် အင့်..လိုး လိုး..ဆောင့် လိုး. မဆောင့်ရင် အင့်အင့် မုန်းမှာ ပဲ..လိုး.. သွက်သွက်ကြီးလိုး.. သူ့သားထက်သာ အောင်ဆောင့်..ဆောင့်.. အာ့ အာ့..ပစ် ပစ်လိုးပါလားလို့်..လိုး.”
ဆယ်မိနစ်ကျော်ကျော်အရပ်မနား ပစ်လိုးတော့ ချွေးတွေထွက်လာတယ်။ ဒူးထောက်လိုးရတာကိုလည်း အားမရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ နှင်းအိပေါင်ကြီးတွေကို ထမ်းနေလျက်နဲ့ ဖင်ဆုံအကြီးကြီးကို ခွပြီးဆောင့်ကြောင့်ပြင်ထိုင်တယ်။ နှင်းအိပါးစပ်က ဘာတွေပြောနေမှန်းလည်း မသိတော့ဘူး။
နို့ကြီးတွေ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆွဲ ခြေဖျားထောက်ပြီး တစ်ဖျောင်းဖျောင်းနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါ ပစ်ဆောင့်လိုးရော။ စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးပြူး မို့မို့ ဖောင်းကြွတက်နေပြီး စောက်ခေါင်းအထစ်အငေါ့ မရှိအောင် လိုးလမ်းပွင့်နေတော့ စိတ်ရှိလက်ရှိမလိုးခဲ့ရ
သမျှ အတိုးချပြီးပစ်လိုးတာ နဖူးကြော.. မေးကြော.. လည်ပင်းကြောတွေအကုန်ထောင်ထ နေတယ်။
” ဖျောင်း ဖျောင်း ဖန်း ဖန်း.အင့်အင့်. ကောင်းလား သမီး.ဖောင်း ဖောင်းပြွတ် စွပ် ဖျောင်း ကောင်းလားကွာ.ဖုံး. “
” ကောင်းတယ် ယောင်္ကျားရေ..လိုးလိုး.. ဘာသမီးလဲ..အာ့..ဘာသမီးလဲ.. လိုးတဲ့သမီးလား.. ဖျန်းဖျန်း ဖောင်း ပြွတ်. အာ့ဟာ့..မယား..မယား.. အင့်..မယားဖြစ်နေပြီ..အီးဟီး ကောင်းတာဆောင့်.
အလိုးခံမယားဖြစ်နေပြီ ယောင်္ကျားရဲ့. အားဟား ကောင်းတာ..ကောင်းတာ..ပြီး တယ်ယောင်္ကျားရေ.. ပြပြီးပြီ ပြီပီ..ငတင်ကို မလိုးနိုင်သမျှ သူ့အဖေနဲ့မှပြီးတော့တာပဲ. အိုးဟိုး.. လီးရည်တွေ လီးရည်တွေနော်.. အားဟား..ယောင်္ကျားလည်း ပြီးတယ်.. အာ့ အာ့ ကောင်းလိုက်ထာနော်..နွားပျို
သန်လှ နွားအိုပန်းသေ သလောက်ပဲရှိတယ်.. အားဟာ့ အာ့ ဆောင့်တုန်း “
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပစ်ဆောင့်ပြီး ဦးမင်းကို ကိုယ်လုံးကြီးနှင်းအိပေါ်ကို မှောက်ကျသွားသလို နှင်းအိလည်းဆိုဖါပေါ်မှာခြေကားယား လက်ကားယားပစ်ကျသွားတော့ သူ့စောက်ခေါင်းထဲက လီးကြီးနဲ့အတူ လီးရည်တွေစောက်ရည်တွေယိုစီးပြီး ထွက်လာကြရော။
မောင် ရေ ဖြေး ဖြေး နော်